ကုန်ကြမ်း Lapatinib (231277-92-2) HPLC≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Lapatinib
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Lapatinib (CAS 231277-92-2) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Lapatinib အမှုန့် ထိုကဲ့သို့သောရင်သားကင်ဆာနှင့်အဆုတ်ကင်ဆာအဖြစ်အစိုင်အခဲမြင်းသရိုက်အနာများအတွက်ကုသမှုအဖြစ် GlaxoSmithKline (GSK) ကတီထွင်ထားတဲ့ Anti-ကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုမူးယစ်ဆေး Capecitabine နှင့် တွဲဖက်. ခေတ်မီသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူလူနာအတွက်အသုံးပြုရန်, မတ်လ 13, 2007 အပေါ် FDA ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Lapatinib tyrosine kinases inhibitors လူ့ epidermal growth factor receptor အမျိုးအစား2(HER2 / ERBB2) နှင့် epidermal growth factor receptor (HER1 / EGFR / ERBB1) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ binding ligand အပေါ်သို့အဲဒီ receptor autophosphorylation တားဆီးဖို့ intracellular phosphorylation ဒိုမိန်းချည်နှောင်။
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 137-139 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကို Temp:4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
II ကို။ စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Lapatinib (231277-92-2) အသုံးပြုမှု
Lapatinib (CAS 231277-92-2), ကုန်သွယ်ရေးနာမကိုအမှီ Tykerb, Tyver ဖြစ်ပါတယ်။
2 ။ Lapatinib အသုံးပြုမှု:
1) Lapitinib နှုတ်ဖြင့်သိမ်းယူခံရဖို့တက်ဘလက်ဖြစ်ပါတယ်။
2) Tablet များ, 1 သောက်သုံးသောအရွယ်အစား 250mg လာကြ၏။
3) သင်၏ဆရာဝန်များကညွှန်ကြားအတိအကျအဖြစ် lapitinib ယူပါ။
4) Lapitinib (ဆေးများခွဲဝေအကြံပြုသည်မဟုတ်, နေ့စဉ်တစ်ချိန်တည်းမှာစုစုပေါင်းထိုးယူ) မတိုင်မီအနည်းဆုံးတစ်နာရီယူ, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်နာရီအစားအစာပြီးနောက်ရပါမည်။
Lapatinib (5-231277-92) ယူပြီးစဉ် 2) ကျွဲကောသီးထုတ်ကုန်ကိုစားသို့မဟုတ်မသောက်ပါနဲ့။
6) သင် lapitinib တစ်ထိုးလက်လွတ်ခဲ့လျှင်အဖြစ်မကြာမီသငျသညျထိုနေ့ရက်ကိုမှတ်မိအဖြစ်ကယူပါ။ သငျသညျတစျနေ့လက်လွတ်လျှင်, နောက်နေ့သင့်ရဲ့ထိုးနှစ်ဆပါဘူး။ သငျသညျအဘယ်သို့ပြုရမည်သေချာမသိကြလျှင်ပဲလွဲချော် dose.Call သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုကျော်သွား။
7) သင့်ဆရာဝန်ကိုသင်ကုသမှုသည်းခံပုံကိုပေါ် မူတည်. lapatinib သင့်ရဲ့ထိုးညှိစေနိုင်သည်။
3 ။ Lapatinib အပေါ်သတိပေး
Lapatinib အသည်းပြင်းထန်ဖြစ်နိုင်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အသည်းပျက်စီးမှုအဖြစ်မကြာမီရက်ပေါင်းများစွာအဖြစ်ပေါ်ပေါက်သို့မဟုတ်အဖြစ်နှောင်းပိုင်းတွင်လပေါင်းများစွာအဖြစ် Lapatinib (CAS 231277-92-2) နဲ့ကုသမှုရဲ့ start ပြီးနောက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရှိသည်သို့မဟုတ်ကာလအစဉ်အမြဲအသည်းရောဂါရှိခဲ့ကြပါလျှင်သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။ သငျသညျကိုအောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများမဆိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုပဌနာ: ယားယံ, အရေပြားသို့မဟုတ်မျက်စိအဝါရောင်, မှောင်မိုက်ဆီးခြင်း, အစာအိမ်, ပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးထွက်သို့မဟုတ်ကွိတျ၏အထက်လက်ယာစိတျအပိုငျး, ဒါမှမဟုတ်ဖျော့သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့အတွက်နာကျင်မှု။
သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အတူအားလုံးချိန်းထားပါ။ သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏အသည်းပျက်စီးခံရဖို့ islikely သို့မဟုတ် lapatinib အားဖြင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးရှိမရှိကြည့်ရှုရန်သင့်ကုသမှုမီနှင့်ကာလအတွင်းအချို့သောဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအမိန့်ပါလိမ့်မယ်။
lapatinib ယူပြီး၏အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။
Lapatinib ပရိုတိန်း kinase inhibitor (TKI) လို့ခေါ်တဲ့ပစ်မှတ်ထားကင်ဆာမူးယစ် (ဇီဝကုထုံး) အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ HER2 (လူ့ epidermal growth factor receptor 2) လို့ခေါ်တဲ့ပရိုတိန်းပမာဏရှိသည်ကင်ဆာအတွက်အသုံးပြုမယ့်ပစ်မှတ်ထားကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ကရင်သားကင်ဆာကင်ဆာ HER2 ပမာဏရှိသည်။ သူတို့ဟာ HER2 positivecancers ဟုခေါ်ကြသည်။ HER2 ဆဲလ်ကြီးထွားကင်ဆာနှင့်သွေးခွဲစေသည်။ Lapatinib (231277-92-2) ကဆဲလ်တွေကြီးထွားလာကိုရပ်တန့်သို့မဟုတ်သေဆုံးစေ HER2 ချွတ် switches ။
III ကို။ Lapatinib (231277-92-2) HCML
IV ။ AASraw ထံမှ Lapatinib ဝယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
"Lapatinib" ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel
Nootropics အမှုန့် (18)
ဟို steroids (48)
Nandrolone အမှုန့်စီးရီး (8)
Estradiol အမှုန့်စီးရီး (8)
အယ်လ်ဇိုင်းမားမူးယစ်ဆေး J147: တစ်ဦးကအစွမ်းထက် Curcumin အနကျအဓိပ်ပါယျ J147 Neurotrophic ခြံဝင်း
06 / 19 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က56
09 / 12 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က54
01 / 17 / 2019 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က
01 / 08 / 2019 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က
12 / 27 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က
12 / 18 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က
Nandrolone Ester (DECA Durabolin) မှအဆိုပါအပြီးအစီးလမ်းညွှန်
12 / 14 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က0
Otilia on Cetilistat (Oblean) အမှုန့်
Alissa on Trenbolone Acetate (Tren Ace) အမှုန့်
တဗိသ on Oxandrolone (Anavar) အမှုန့်
Earl on Cetilistat (Oblean) အမှုန့်
Arlie on Tadalafil (Cialis) အမှုန့်
Lorenza on testosterone အမှုန့်
Margerie on Cetilistat (Oblean) အမှုန့်
ပက်ထရီရှာ on testosterone အမှုန့်
Oxandrolone (Anavar) အမှုန့်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 3.335ထဲက